Budada PRL-8-53 (51352-87-5) hplc = 98% | Budada AASraw SARMS
/ Products / SARMS / PRL-8-53 budada
SKU: 51352-87-5. Category: SARMS
AASraw waa awooda ereygu iyo wax soo saarka ka garaam in si ballaaran oo ah budada PRL-8-53 (51352-87-5), hoos xeerka CGMP iyo nidaamka tayada trackable.
Budada PRL-8-53 (magaca kiimikada ah Methyl 3- (Xaamo (benzyl (methyl) amino) benzoate) waa unug kombuyuutar ah oo loo yaqaan 'NONETX' oo laga helay 2 oo lagu daboolay 1972 dhamaadkii Dr. Nikolaus Hansl, oo ahaa nuofofarmacistoole oo ka tirsan Jaamacada Creighton ee Omaha, Nebraska.
PRL-8-53 video budada
Cuntooyinka PRL-8-53 Calaamadaha aasaasiga ah
Name: Budada PRL-8-53
Formula kelli: C18H22ClNO2
Miisaankani waa: 319.82578
Dhibcaha Biyaha: 149-152 ℃
Nadiifinta PRL-8-53 ee kor u qaadista hawlaha maskaxda iyo kor u qaad dheeraad ah
2. Isticmaalka budada PRL-8-53 Isticmaalka:
Daraasadda kaliya ee aadanaha ee budada PRL-8-53 waxay ku saleysneyd cunnida hal xaddiga mganka 5. Ma jiraan wax macluumaad ah oo ku saabsan wax ku oolnimada ama qiyaasta sunta ah ee qiyaas kasta oo kale ee aadanaha.
Digniin ku saabsan budada PRL-8-53
Sida laga soo xigtay caddaynta jiirka, PRL-8-53 budo ayaa u muuqda inay yihiin dopamine agonist. Tani waxay ka dhigan tahay in ay hagaajin karto dawooyinka dopamine waxaana badanaa loo isticmaalaa bukaannada Parkinson. Dadka aan u baahnayn muuqaalkan, waxay noqon kartaa wax aan loo baahnayn oo ah budada PRL-8-53.
Cilmi-baarista sunta ee jiirka ayaa muujinaya heerar aad u sarreeya oo leh heerarka LD50, laakiin dhab ahaantii caddayn dheeraad ah ayaa loo baahan yahay. Sidoo kale, waxay u muuqataa wax saameyn ah oo ka iman kara budada PRL-8-53 waa hoos u dhaca dhaqdhaqaaqa maskaxda ee gudaha maskaxda.
Mashruuca PRL-8-53 ee Mashruuca Waxqabadka
Farsameynta ficilkan ee nootropic tan hadda lama yaqaan laakiin waxa laga yaabaa, in qayb ahaan, la jiifiso hababka daacuunka. Dr Hansl, oo ah abuuraha dhismuhu wuxuu ka hadlayaa joornaalka Phi Delta Kappan in budada PRL-8-53 ay kor u qaadaan maskaxda ee jawaabta loo yaqaan 'acetylcholine', iyo aaggu ma aha mid kiciya. Patentka loogu talagalay PRL-8-53 budada cayriin ayaa ka hadlaysa hababka daacuunka.
Imtixaanka xayawaanka ee ku saabsan jiirka ayaa muujiyey 4mg / KG oo kor u kacay apomorphine (dopamine agonist) oo kordhay jeexjeexda jiirka, taas oo tilmaamaysa in budada PRL-8-53 qadar ahaan ay tahay qiyaas dopamine. Daraasaddan oo kale ayaa lagu xusay horumar ah ka jirta barashada ka-hortagga xaaladaha. Miyuu buunotopic ah ma kobcinayo ficillada amphetamine ee jiirka iyo ma muuqan in la joojiyo dhaqdhaqaaqa MAO. Daraasada hal-abuurka ah ee dadka ayaa si kooban u sheegaysa in budhcadda PRL-8-53 ay sii kordhinayso dopamine oo waxay sababtaa qayb ka mid ah xakamaynta serotonin.
Faa'iidooyinka kala duwan ee budada PRL-8-53:
Daraasaddan kaliya ee la daabacay ee budada PRL-8-53 waxay muujinaysaa waxoogaa horumarin ah oo helitaanka ereyga inta lagu jiro hawlgalka xasuusinta. Ka qaybgalayaasha waxaa la siiyay 5mg of PRL-8-53 saacadaha 2 ka hor imtixaanka ka dibna kadib ayaa la weydiistay inay dhagaystaan ​​qoraalka erayada 12 ee taxane gaar ah oo iyaga u akhri meelaha dhibcaha mustaqbalka (wax yar ka dib baaritaanka, maalin kadib iyo 4 maalmo kadib). Dheefaha yar yar waxaa laga helay helitaanka si dhakhso ah, laakiin ka badan 80% horumarinta ayaa loo sheegay in dadka la tijaabiyay ka dib markii hore markii si xun u dhajiyay baaritaanka (6 / 12 erayada saxda ah ama ka hooseeya).
(2) Faa'iidooyinka aan la daabicin (Suurtagalka) - Jimicsiga Tusaalaha Joometeriga
Waxaa xiiso leh, abuuraha abuuruhu wuxuu kaloo ka hadlayaa tijaabooyin kale oo u muuqda mid aan la heli karin ama aan la daabicin. Jariidadda daabacan 1978, Dr Hansl wuxuu sheegayaa in budada PRL-8-53 ay kor u kacday dhibcaha xisaabeed ee jimicsiga. Ka qaybgalayaashu waxay muujiyeen taxane ah qaabab joomatari ah waxayna weydiisanayaan inay ka soo qaadaan xasuusta, horumarinta tirakoobka ayaa la xusay.
(3) Jimicsiga Dhabarka Jidhka
Maqaalkani, Dr Hansl wuxuu sheegayaa nambarada ku salaysan garashada oo ay ka qaybgalayaashu ka jaraan 7, ku dar 1, tirtiraan 7, ku dar 2 iyo wixii la mid ah ilaa lambarka "gool". Waqtiga gaaban ee lambarka "goolka" waxaa lagu qoray kooxda budhcadda PRL-8-53.
(4) Imtixaanka Fududaynta Afka
Dr Hansl wuxuu ka hadlayaa imtixaan mawduucyada laga codsaday in ay sameeyaan ereyo ka kooban xarfo iyo dhibco taxane ah. Tusaale ahaan "UR" waa in loo beddelaa erey kasta adigoo ku daraya waraaqo bilawga iyo dhammaadka ereyga, adoo badalaya dhibcaha warqad. "UR" waxay noqon kartaa tusaale ahaan "hadda". Horumarin heer sare ah ayaa laga helay kaqaybgalayaasha kuwaas oo qaatay daroogada.
PRL-8-53 Qalabka cagaaran
Sida loo iibsado PRL-8-53 budada laga bilaabo AASraw
PRL-8-53 Khudbadda Rootiga:
dib u eegis 1 waayo, Budada PRL-8-53
Budada PRL-8-53 waa midda dahsoon
Kombiyuutarka LGD3303 (1196133-39-7)
Deeqda fuuqbaxa ee Entecavir